Hamarino Valve Ahoana no mba hamonjy Angovo? - China toy ny Valve (Tianjin)
Faladiany vavahady miditra tsimoramora farany
Mangina Hamarino Valve
Hamarino Valve Ahoana no mba hamonjy Angovo?
Hamarino miditra tsimoramora dia ny miantehitra amin'ny herin'ny tenany ny tsiranoka avy hatrany manokatra na manidy ny miditra tsimoramora, ny anjara asany dia ny hisorohana ny haino aman-jery indray. Ny anarana be dia be, toy ny maso valves, maso valves, afa-tsy mikoriana varavarana. Araka ny rafitra dia azo zaraina ho sokajy roa.
(1) Lift: miditra tsimoramora vatana hifindra eny an-mitsangana centerline. Toy izany dia miditra tsimoramora roa: ny iray dia marindrano, nitaingina amin'ny marindrano sodina, ka nakatony-miditra tsimoramora eny miditra tsimoramora mitovy endrika, ary ny iray dia mitsangana, nitaingina ao amin'ny mijidina sodina.
(2) mitsingevaheva: miditra tsimoramora seza manodidina ny ivelan'ny Pin fihodinan'ny, ireo manana iray valves ila, avo roa heny miditra tsimoramora sy Orange Peel ny hevitra, fa ny foto-kevitra iray ihany izany.
Suction tongotra miditra tsimoramora paompy suction sodina no sembana miditra tsimoramora, ny rafitra sy ireo karazany roa ny fijanonana valves, fa iray ihany, nefa ny farany ambany dia misokatra, mba hamela ny rano hiditra.
Post fotoana: Sep-09-2018